Toro-hevitra plastika fotsy azo atsofoka any Shina momba ny fanamboarana sy ny orinasa | MOLONG
Namidy tamin'ny BOX OF 50
Ny plastika mafy be kalitao PVC dia manakana ny fanondrotana
Pre-Sterilized an'ny EO Gas
Fonosana Blister tsirairay
Mifanaraka amin'ny gripa tattoo rehetra
Ny haben'ny tendrony
Ny tendron'ny tatoazy azo atsofoka amin'ny rivo-doza dia vita amin'ny plastika kilasy fitsaboana, azo antoka ary hadio.
Ny tendrony voafaritra tsara dia mamela ny fampidirana fanjaitra milamina sy ny fikorianan'ny ranomainty tena tsara.
Toro mangarahara ho an'ny famantarana ny loko mora kokoa.
Ny fonosana vita amin'ny blaogy tsirairay, alohan'ny fanaingoana amin'ny entona EO ary misy mari-pamantarana fanampiny momba ny sterilization ao anatiny.
Ny loko dia azo namboarina ho an'ny isa nomena.
Zahao ny tranokalanay raha mila vokatra tatoazy hafa !!!
Ny fonosana blisteran'ny olona sy ny gazy EO nohamarinina.
50pcs isaky ny boaty, boaty 100 isaky ny baoritra.
Ho an'ny varotra antsinjarany, ny kaontinao dia halefa amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra misosa toy ny FedEx, UPS, TNT, DHL ary EMS.
Ho an'ny ambongadiny, izahay dia manohana ny fitaterana an-dranomasina sy an-habakabaka.
Satria misy fiantraikany amin'ny entana maro ny entana, dia hampahalalana ny vola manokana raha vao voamarina ny kaomandinao.
F: Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny vokatra MOLONG TATTOO?
A: Ny orinasanay dia mitondra hatrany ny fitsipiky ny fanomezana mpanjifa ny vokatra misy kalitao avo, vidin'ny fifaninanana, azo ampiharina tsara amin'ny fampiasana saina sy serivisy aorian'ny fivarotana.
F: Ahoana ny fomba hanafarana ny vokatrao?
A: Rehefa afa-po amin'ny vokatray izahay dia mba lazao ny fivarotanay ny maodelin'ny vokatra. Ny varotra dia hanao INVOICE mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. Hizaha sy andoavan'ny mpanjifa dia handamina ny entana izahay ary hampahafantatra ny laharan'ny fanarahan-dia tsy ho ela. Matetika ny fandefasana dia DHL, UPS, FEDEX ary TNT.
F: Azo ekena ve ny serivisy OEM / ODM?
A: Ny orinasanay dia afaka manao serivisy OEM / ODM amin'ny milina, pigment, fanjaitra, arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Afaka manao loko isan-karazany isika, pirinty LOGO, fonosana andian-dahatsoratra sns.
Miorina amin'ny fomba samihafa amin'ny vokatra, ny teny amin'ny fanaovana OEM / ODM dia tsy hitovy. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Raha misy antsipiriany na katalaogna hafa, andefaso fanontanina izao
Previous: TP-7 THUNDERLORD famatsiana herin'ny tatoazy
Manaraka: Machine KingKong 3 Tattoo Cartridge
Torohevitra momba ny tatoazy azo ampiasaina
Torohevitra momba ny tatoazy plastika
Soso-kevitra momba ny milina tatoazy
Toro fanjaitra tatoazy
Soso-kevitra momba ny tatoazy
Sariitatra / Tatt manao sarin-tsarimihetsika tokana sy avo roa heny ...
Sarim-pandoko azo ovaina amin'ny silipo azo ovaina ...